अमेरिकाबाट सगुनमा लगानी गर्ने सुनौलो अवसर (प्रेस रिलिज सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अमेरिकाबाट सगुनमा लगानी गर्ने सुनौलो अवसर (प्रेस रिलिज सहित)
डिसी नेपाल , १५ भाद्र २०७५
अमेरिका । सोसल कमर्श साइट सगुनमा लगानी गर्ने अवसर १ महिनाअघि सकिइसकेको अवस्थामा सीमित समयका लागि अमेरिकाबाट लगानी गर्ने सुनौलो अवसर जुरेको छ।
यसअघि सगुनमा लगानी गर्ने अवसर जुलाई २६ मा सकिइसकेको थियो। तर, अहिले भने अमेरिकाभित्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरुको लागि सीमित समयको लागि अवसर प्राप्त भएको हो।
यसअघि सगुनले विश्वभरिबाट सर्वसाधारणहरुले स्टार्ट अप कम्पनी सगुनमा मिनी आइपीओ मार्फत लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको थियो।
तर अमेरिकाका टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना र नर्थ डकोटा राज्यहरुबाट भने सम्बन्धित राज्य सरकारहरुको कानूनी प्रावधानका कारणले मिनी आइपीओ मार्फत लगानी गर्न अनुमति थिएन। अहिले ती राज्यहरुसहित पूरै अमेरिकाबाट सगुनमा लगानी गर्न पाउने अवसर जुरेको हो।
अमेरिकाका केही राज्यहरुबाट सिधै कम्पनीमा लगानी नगरी ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत लगानी गर्नु पर्ने ती राज्यहरुको कानूनी प्रावधानका कारण सगुनमा सिधै लगानी गर्न पाइँदैनथ्यो।
यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सगुनले ‘स्टार्ट इञ्जिन’ नामक फण्ड रेजिङ पार्टनरमार्फत सगुनमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको हो। यस प्रावधान अनुसार इच्छुक लगानीकर्ताहरुले स्टार्ट इञ्जिनको www.startengine.com/sagoon साइटमा गएर लगानी गर्न सकिने छ।
यो विधिबाट अमेरिकाका तोकिएका राज्य मात्र नभइ सिंगो अमेरिकाभित्र जहाँबाट पनि लगानी गर्न सकिने बताइएको छ।
सगुनको विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै
मिनी आइपीओ मार्फत सगुनमा लगानी गर्नुहुने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई बधाइ र धन्यवाद सहित सगुन परिवारमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ । सामाजिक सञ्जाल र इकमर्शको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रच्ने नविनतम योजनामा विश्वास गरेर विश्वभरिबाट सर्वसाधारणहरुले स्टार्ट अप कम्पनी सगुनमा मिनी आइपीओ मार्फत लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराइको थियो । तर अमेरिकाका टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना र नर्थ डकोटा राज्यहरुबाट भने सम्वन्धित राज्य सरकारहरुको कानूनी प्रावधानका कारणले मिनी आइपीओ मार्फत लगानी गर्न अनुमति थिएन।
तर खूशीको कुरा, हामीले उल्लेखित राज्यहरुबाट पनि सगुनमा लगानी गर्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ । उल्लेखित राज्यहरुबाट सिधै कम्पनीमा लगानी नगरी ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत लगानी गर्नु पर्ने ती राज्यहरुका कानूनि प्रावधानका कारण सगुनले स्टार्ट इञ्जिन नामक 'Fund Raising Partner' मार्फत सगुनमा लगानी गर्न पाउने अवसर खुल्ला गरिएको सहर्ष जानकारी गराउँंदछौँ। यस प्रावधान अनुसार इच्छुक लगानीकर्ताहरुले स्टार्ट इञ्जिनको www.startengine.com/sagoon साइटमा गएर लगानी गर्न सकिने छ।
जसको लागि सवै भन्दा पहिले सो साइटमा आफ्नो User Account खोल्नु पर्ने हुन्छ । तत्पश्चात सोहि User Account मार्फत लगानीको पेजमा प्रवेश गरेपछि Invest now बटन देखिने छ । सो बटनमा क्लिक गरेपछि नाम, ठेगाना, जन्म मिति र फोन नम्बर जस्ता विवरण भरेर लगानी गर्न सकिने छ भने डेविट वा के्रडिट कार्ड तथा एसिएच मार्फत लगानीको रकम पठाउन सकिने छ । यस अनुसार फर्म भर्न कम्तिमा अमेरिकी डलर १०१२ (४४ शेयर, प्रति शेयर २३ अमेरिकी डलर) लगानी गर्नु पर्नेछ । विशेष गरि माथि उल्लेखित अमेरिकाका राज्यहरुको लागि यो अवसर खुल्ला गरिएको भएता पनि थप खुशिको कुरो यो पनि छ कि स्टार्ट इञ्जिनको प्रावधान अनुसार अमेरिकाका अन्य राज्यहरुबाट समेत लगानी गर्न पाइने छ । तर अमेरिका बाहेक अन्य कुनै पनि देशबाट यस प्रावधान मार्फत लगानी गर्न पाइने छैन।
यस प्रावधान अनुसार अमेरिकाबाट मात्र बढिमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी उठाउन पाउनेभएकोले यो अवसरको अन्तिम मिति भन्दा अगाडि नै सो रकम उठिसकेपछि लगानीको अवसर स्वतः बन्द हुनेछ । यसर्थ अमेरिका भरि रहनु भएका तर मिनी आइपीओको अवधिमा लगानी गर्न छुटेका सर्वसाधारण सबैले सगुनमा लगानी गर्न पाउने यो अन्तिम अवसर रहेको समेत जानकारी गराउँदछौँ ।
लगानी गर्नको लागि :
सगुन एप डाउनलोडको लागि
थप जानकारीको लागि सम्पर्क :
फोन नंः 703-291 -1212
इमेल : mysagoon@sagoon.com
वासिङ्गटन डिसी ।
अगष्ट ३०, २०१८